Xirfadleyda 10-1000kva Nooca Aamusnaanta Naqshadeeyaha Soo Saara Naaftada Si Toos Ah | Sidaada
Faa'iidooyinka noocan ah nooca koronto-dhaliye aamusan
1, Naqshadeynta cabbirka yar-yar ee aadka u yar waxay si weyn u yareysaa keydinta aaladda iyo qiimaha gaadiidka iyo nadiifinta kastamka. Hal weel 40HQ ayaa qaadi kara 40 nooc oo ah 10-20kva nooc koronto-dhaliye.
2 、 Jaangooyooyinku waxay korsadaan taangiga ugu sarreeya ee shidaalka kaas oo lagu daweeyo gudaha iyo dibaddaba. Naqshadda haanta sare waxay la jaanqaadaysaa mabda'a culeyska, waxaan hubin karnaa in dhuumaha saliidda ay had iyo jeer saliid leeyihiin inta saliidda ku jirta haanta. Markaa waxaan ku bilaabi karnaa gensets isla markiiba wakhti kasta adigoon hawada ka saareynin gacanta, gaar ahaan ku habboon unugyada ATS. Naqshadeynta galvanized gudaha waxay ka hortagi kartaa ifafaalaha saliidda taangiga, hubi inaan waligaa saliid dillaacin.
3, Wareegga nidaamka xakamaynta wuxuu qaataa naqshadeynta isku xira isku-dhafan. Marka nidaamka koontaroolku ku guuldareysto, kaliya ka saar qaybta xakamaynta asalka ah, ka dibna beddel guddiga xakamaynta cusub oo ku xir isku xiraha isku dhafan. Looma baahna in la hubiyo sadarka nidaamka xakamaynta mid mid ka hor inta aanad badalin fiilada.
4, Soo-saarista hawada ee qarsoon waxaa loo qaatay wax soo saar hadda jira oo xoog leh; Soosaarka tooska ah ee badeecada hawada ayaa ka fogaan karta dhibaatada alxanka boosteejada boosteejada iyo fiilada isku xira ee ay sababaan xilligan xad dhaafka ah. Nooca qarsoon ee sanduuqa xoogga leh ayaa ka fogaan kara shilalka daadadka ka dib isku xirka xarigga, xir oo xir albaabka, si loo gaaro adeegsiga korantada oo ammaan ah.
5 Naqshadeynta AVR-ka bannaanka ah halkii aad ka qodan lahayd qaybta si aad u furto sanduuqa dambe ee beddelaha beddelkiisa, kaliya albaabka u fur si aad u beddesho AVR.
6, Way fududahay in la ilaaliyo qaybaha madaxa birta silsiladda oo saliid lagu daro naqshadeynta daaqada dayactirka sare. Marka uma baahnin in aan galno matoor koronto ku rakiban oo dayactirka mashiinka, ama ka saarno daarta dhan.
Xiga: 10-1000kva Nooca Frame Open Nooca Diesel Power Generator Set
MUUQAAL EP-13S EP-16S EP-20S EP-24S EP-30S EP-36S EP-50S EP-68S EP-80S EP-120S EP-200S EP-250S EP-300S
Ra'iisul Power (KVA) 50Hz 16.25 20 25 30 37.5 45 62.5 85 100 150 250 312.5 375
Ra'iisul Power (KVA) 60Hz 19.5 24 30 36 45 54 75 102 120 180 300 375 450
Awooda-ku-taagga (KVA) 50Hz 17.88 22 27.5 33 41.25 49.5 68.75 93.5 110 165 275 343.75 412.5
Awood-ku-taag (KVA) 60Hz 21.45 26.4 33 39.6 49.5 59.4 82.5 112.2 132 198 330 412.5 495
Awoodda Awooda / COS
Cabir 1750x750x800mm 2000X850X850 2240x850x980 2500x1000x1030 2850X1100X1200 2965x1100x1350 3400x1300x1580 3600x1300x1850
Miisaanka 480kg 540kg 580kg 730kg 815kg 900kg 1040kg 1215kg 1480kg 1720kg 2280kg 2735kg 2865kg
Awoodda Haanta 50L 50L 50L 50L 50L 70L 140L 140L 140L 140L 140L 140L 140L
Nooca Mashiinka PERKINS, CUMMINS, KUBOTA, YUCHAI, FAWDE, YANGDONG, RICARDO iwm
Nooca Beddelka Stamford, Marathon, Meccatle, Leroy-somer, Shiinaha stanford, Kuwaaga oo kale iwm.
Xakamaynta Gudida Calaamadaha Badda qoto dheer, ComAp, Smargen iwm
Waqtiga Orodka (p / tank) 8 @ rar buuxa 6 @ rar buuxa 4 @ culeys buuxa
Nooca Qaabdhismeedka SOUNDPROOF
Heerka Buuq (@ 7m) 72
ISO9001 La Xaqiijiyay HAA
CE Certified HAA
Isku dar Qaboojinta, Kuleylka iyo Awood dhaliyaha Nidaamka